Ukubuyekezwa kweMikhiqizo ka-Semalt nokuthi Bangakulinganisa Kanjani ku-10 I-10 ephezulu yokuSesha kweGoogle
Ikhasi lokuqala le-google lilawula i- 92% yethrafikhi. Kusho ukuthini lokhu ngebhizinisi lakho? Kusho ukuthi i-SEO ibaluleke kakhulu kunangaphambili.
Uma wenza ibhizinisi, usesha izinto ezinjengegama elingukhiye we-keyword, i-backlinking, kanye negunya lokusesha kungathatha isikhathi esiningi. Uma uzama ukuguqula lokhu ngokubhekela izidingo zeklayenti lakho, kuba nzima. Lokhu kugcizelela yingakho udinga umsebenzi ozinikele eqenjini lochwepheshe e-SEO.
ISemalt yinkampani ebeke ukubaluleka kwe-SEO phambili. Banikeza ukwesekwa ezinkampanini ezingenabo ochwepheshe be-SEO ezindlini.
Basebenza nalabo abangajwayelekile nge-SEO ngesivivinyo samahhala sezinsuku zabo se-14. Futhi banomkhiqizo obekelwe labo abangafuni ukungena ohlangothini lwezobuchwepheshe: AutoSEO.
Ukusungula Indaba Yabo Yempumelelo
ISemalt yinkampani ezithandekayo kwirekhodi eliqinisekisiwe. Banamacala amaningi empumelelo, amanye abona ukwanda okukhulu kakhulu. Endabeni yeSurgery TR, baba nomthelela ekwandeni kwezikhathi eziyishumi nane. Ungabona imininingwane yethrafikhi yabo ngezansi.
I-AutoSEO yabeka inkampani yabo ku-100 ephezulu yamagama asemqoka ayi-179 izinyanga ezine. Okwalethe kwabayi-10 abaphezulu kwakuyiphakethe le-FullSEO. Le phakheji ibavumele ukuthi batshaye i-92% yezimoto eziningi zabantu abafuna le nsiza. Sizoxoxa ngokubuyekezwa okuningana okwengeziwe kwale migomo kamuva, kodwa icala elilula yilokhu: uSemalt uyasebenza.
I-Semalt Ingabe i-ejensi egcwele abantu abaningi eqasha iqembu elihlukahlukene labantu abakhelwe ukuphatha noma iyiphi inkampani edinga ukukleliswa i-SEO. Bayinhlangano yomhlaba wonke, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ukhuluma ulimi olujwayelekile nabo.
Ungaxhumana nabo kwi-Skype, WhatsApp, telegram.me, i-imeyili, noma ngocingo. Nonke ningabona iqembu labo ekhasini labasebenzi babo . Ungathatha isikhashana uvume ufudu lwazo.
Uma sibheka iTheminology
Uma ufunda lokhu, kungenzeka unentshisekelo ku-SEO. Ungaba i-freelancer, umnikazi webhizinisi elincane, noma i-ejensi yokukhangisa engikanye nayo.
Kunoma yikuphi, ngeke ufike kude ngaphandle kokuqonda ezinye ze-jargon embonini.
I-SEO, noma i-Search Engine Optimization, yakha iwebhusayithi yakho ngendlela yokuthi uma abantu bafuna ithemu ethile, bakuthole. Lawa magama, noma amagama agqamile, andisa inani lethrafikhi kuwebhusayithi yakho. Isibonelo, uma ufuna ukuba ngudokotela ohlinzayo opulasitiki owaziwa nge-rhinoplasty, amagama akho angafaka "ukuhlinzwa kwe-rhinoplasty" noma "i-rhinoplasty eshibhile."
I-algorithm yakwaGoogle yakhela ngendlela lapho ixhumanisa khona nabantu kumawebhusayithi afanele, anegunya. Bona isibonelo esingenhla, esisebenzisa igama elingukhiye elithi "rhinoplasty." Zinegunya futhi ngoba zivela emithonjeni ethembekile. Kwenza lokhu ngokuthumela abakhwetha, noma i-bots eyakhelwe ukuskena amawebhusayithi. Ama-Crawlers anquma ikhwalithi ngokusekelwe ezicini ezahlukahlukene ezimbalwa.
Amagama angukhiye ahambelana namagama i -algorithm ecabanga ukuthi afaneleke kahle ukuchaza okuqukethwe kwakho.
Ama-backlink yinombolo yokuxhumeka kokuqukethwe kwakho okuvela kwamanye amawebhusayithi, ikakhulukazi uma lawo mawebhusayithi ebhekwa njengegunya.
Ukwakha isixhumanisi inqubo yokusungula ama-backlinks.
Amamayela Omphakathi afana nokwabelana nama-tweets kabusha
Kunezinto eziningi eziningi ezingena kulokho i-SEO, futhi ngeke singene kuzo zonke lapha, kodwa lezi zizobalulekile kuwe ukuthi ukwazi ukuqonda ukuthi yini engena ezicini zikaSemalt. I-blog yethu inomhlahlandlela ogcwele kakhulu ku-SEO uma ufisa ukudlulela ngokujulile kusihloko.
Imikhiqizo KaSemalt Iyikhulisa Kanjani i-SEO Yakho
Manje njengoba sinombono ongcono wokuthi yini esiyidonsayo, singangena emikhiqizweni kaSemalt ngokucace kakhudlwana. Sigxila kuzindawo ezitholakala ngaphansi kwethebhu yemikhiqizo yazo ukwenza izinto ziqale. Lokhu kufaka phakathi:
Iwebhusayithi ichaza ukuthi i-AutoSEO yenzelwe labo abafuna ukukhuphula inzuzo yewebhusayithi yabo, kepha ngaphandle kokutshala imali eningi. I-AutoSEO ingumkhiqizo oyisekela kulabo abafuna ukungena kwi-SEO. Ngabantu abayizinkulungwane eziyi-14 emazweni angaphezu kuka-192 abayingxenye yokuphakanyiswa, ithole ukuthandwa okuhle.
Isizathu esikhulu salokhu kuthandwa yisilingo sezinsuku eziyi-14 .99 abanikela ngaso. Ngokuthola i-AutoSEO, uchwepheshe unikezwa i-akhawunti yakho ukuhlaziya isayithi lakho. Ochwepheshe be-SEO bazothola amagama asemqoka asetshenziswa kakhulu embonini yakho, kepha ahlukile ngokwanele ukukunikeza izivakashi ezifuna ukuthenga.
I-Semalt inikeza imibiko esezingeni ngohlelo lwabo lokuhlaziya. Ungabona ukuthi inkampani yakho yenza kanjani ngokubheka kudeshibhodi, okuyisici esiyinhloko uma ungene ngemvume.
Ngemuva kokuhlaziywa kwamagama asemqoka embonini yakho, inhloso yokugcina kuzoba ukwakha izixhumanisi kuwebhusayithi yakho ukuze uqinisekise ukuthi unamagama asezingeni eliphakeme.
Baphinde basebenzise izixhumanisi ze-anchor, ezizothatha abasebenzisi bangene endaweni ethile ekhasini elihambisana nabo. I-AutoSEO ihlanganisa lezi zixhumanisi ze-anchor ne-non-anchor ukusungula izixhumanisi zegama lakho lomkhiqizo njengemithombo egunyaziwe eceleni kwalawa magama abalulekile.
Amanani kulolu hlelo azohluka phakathi kwama- $ 99 ngenyanga kuya cishe ku- $ 900 ngonyaka. Ungase ukhethe ubude bomkhankaso wakho wokuba inyanga eyodwa, izinyanga ezintathu, izinyanga eziyisithupha, noma unyaka owodwa. Ngokuqhathanisa, amanye amawebhusayithi amaningi we-SEO anezintengo eziyisisekelo ku- $ 1000 ngemikhankaso yawo. Amaphakheji abo futhi athambekele ekukhetheni okumbalwa.
I-FullSEO yinguqulo ethuthukisiwe ye-AutoSEO. Umehluko obaluleke kakhulu phakathi kwalokhu ne-AutoSEO ukuthi unomphathi weSemalt owabelwe icala lakho. Umphathi usebenza nochwepheshe we-SEO ekuqaleni, abese ekuthumela imibiko ejwayelekile ngentuthuko yomkhankaso wakho.
I-FullSEO itshalomali esikhathini esizayo sebhizinisi lakho. I-ROI, noma ibuyele ekutsaleni imali, imayelana nama-700% ngokusekelwe kulwazi lwaklayenti lwangaphambilini. Ngawo wonke amadola ayi-100 owasebenzisela lokhu, uhola i-700 emuva.
Isibonelo, i-ejensi ethengisa impahla ethengiswayo eMexico yanda cishe ngamaphesenti angama-700 emigwaqo, okubenza bahambe benombolo lokuqala kumagama athile abalulekile. Ngokuthola indawo ephezulu yamagama asemqoka angama-724, kuyabavumela ukuthi bakhombe labo abafuna impahla eMexico kalula. Ngaphandle kwe-FullSEO, bebengeke balibone leli zinga lethrafikhi.
Ukuqhathanisa okuhle okwenziwa ezinye izinkampani, singabuka iWebFX. I-WebFX inikeza uhlu oluhlaba umxhwele lwezimpawu ze-SEO namathuluzi wokuhlaziya. Kodwa-ke, iSemalt inokuhlukahluka okuningi ekukhetheni kwabo kwamanani.
Kumabhizinisi amancane anezabelomali ezincane, lokhu kungabiza kakhulu. Ngaphansi kwenketho ye-FullSEO, uSemalt ujabule ngokukutholela inani lesilinganiso sephakethe le-SEO lasendaweni. USemalt ufuna ukusebenza nesabelomali sakho. Ukuhlolwa okusheshayo kwewebhusayithi yabo kuveza izindleko eziphansi zanyanga zonke zama- $ 475 ngenyanga.
Ungahle uzame isivivinyo sezinsuku eziyi-14 kanye ne-AutoSEO ukuze uzikhulule emcabangweni walokhu. Kodwa-ke, kungadingeka ukuthi usebenzise iwebhusayithi ehlukile, njengoba uSemalt ezokutshela ukuthi iliphi iphakethe elizosebenza kangcono kwisiza ngasinye. Kalula nje, abanye abathengisi abanikezeli ngokuhlukahluka okufanayo kwemikhiqizo uSaltalt anayo.
Yini i-E-Commerce SEO?
I-Semalt inikeza umkhiqizo okhethekile walabo abane-E-Commerce, noma isitolo se-inthanethi, izidingo. Le phakheji ifana naleyo esivele ishiwo futhi ingaphezulu kokunwetshwa komkhiqizo we-AutoSEO nomkhiqizo we-FullSEO.
I-Semalt ihlose amagama angukhiye ophansi asuselwa kwimikhiqizo nophawu. Amagama angukhiye odinga ukuwahlela, noma amagama angokhiye angawaphakamisa, agxila kubantu abafuna umkhiqizo othize.
Isibonelo, uma ufuna ukukleliswa ngegama elingukhiye elithile, "amawashi wamadoda ashibhile abukeka ebiza kakhulu," uzothola ukuthi uhlu lwamanje oluphezulu lubandakanya okuthunyelwe kohlu noma ividiyo.
Nge-E-Commerce, ungathola iwashi lakho kulolu hlu noma amavidiyo aphezulu aphezulu. Ngamagama athile abekwe kahle kanye nokukhulisa i-SEO, uzoletha ibhizinisi lakho kuleveli efanayo yokugunyazwa yaleli gama elingukhiye.
I-analtics igama elisetshenziswa yizinkampani eziningi. I-Google inalo lonke uhlelo lokusebenza olwakhelwe ukulandelela ukuthi izikhangiso zakho ezikhokhelwayo zenza kanjani ezibizwa ngeGoogle Analytics. Lo mkhiqizo ungaphezulu kwesici se-AutoSEO ne-FullSEO, futhi ideshibhodi iza nemikhiqizo yomibili.
Ithuluzi lokuhlaziya likaSemalt linikeza ukuzethemba kumthengi ngendlela enokuthi ifundwe kalula. Inikeza futhi iSemalt nomthombo wokuziphendulela, ikunikeze ubufakazi bemikhankaso yakho ekhokhelwayo esebenza. Ngezansi kunezinye izibalo zabantu abasebenzisa isici sokuhlaziya.
Ukuhlaziywa okujulile kukuhlinzeka ngekhono lokuqapha izimbangi zakho, ukukhomba izimakethe ezintsha, bese uthola amagama asemqoka atholakalayo ukwenza imali ngalolo lwazi. Futhi, i-Semalt ikuvumela ukulandelela izikhundla zakho nganoma isiphi isikhathi sosuku.
Lapho ubona iwebhusayithi isuka ku-HTTP iya ku-HTTPS, lokhu kuyisibonelo sesitifiketi se- SSL esisebenzayo. Lesi sici sokuphepha sibethela idatha yakho ukuze ikwenze kube nzima kubaduni ukuthola ukufinyelela ekuboneni imininingwane, efana nedatha yekhadi lesikweletu.
Kuyisidingo uma uyiwebhusayithi ye-E-Commerce noma iwebhusayithi esekwe kwinkonzo egcina noma iyiphi idatha yamakhasimende ebucayi. Futhi, uma i-Google ikhomba isiza sakho njengendawo ephephile, izoba nethuba elingcono lokufinyelela amazinga aphezulu.
Isifinyezo sendlela uSemalt Angakusiza Ngayo Ezingeni eliphezulu ku-10
Ngerekhodi elifakazelwe, amakhulukhulu amakhasimende anelisekile, nethimba labasebenzi abahlukahlukene, iSemalt iyiqembu elibona intengo labantu abazimisele ukusebenza nawe ukuqinisekisa ukuthi ungafinyelela izinhloso zakho
Sibonile ukuthi i-AutoSEO, i-FullSEO, i-E-CommerceSEO, i-Analytics, kanye ne-SSL zonke zinenzuzo kanjani ngokushayela ithrafikhi kuwebhusayithi yakho. Ngeqembu labo lochwepheshe nabaphathi, uzothola amagama abalulekile, nama-backlinks adingekayo ukuletha iwebhusayithi yakho phezulu kwe-Google.